सूर्य थापाले भेटे संसद भवन अगाडिको सडक मै झन्डै भेटे रामधुलाई ! - Nepali in Australia
October 4, 2021 October 4, 2021 autherLeaveaComment on सूर्य थापाले भेटे संसद भवन अगाडिको सडक मै झन्डै भेटे रामधुलाई !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा झण्डै कु’टिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको दिनदहाडै सातो टिपिएको हो ।
January 29, 2021 January 30, 2021 auther